Doorashada Senatorada Aqalka Sare ee G/waqooyi oo Sabtida la bilaabayo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Doorashada Senatorada Aqalka Sare ee G/waqooyi oo Sabtida la bilaabayo
Doorashada Senatorada Aqalka Sare ee G/waqooyi oo Sabtida la bilaabayo
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa shaaca ka qaaday in Dooraashada Senatorada Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi la bilaabi doono toddobaadka soo socda, marka ay gudbiyaan liiska murashaxiinta.
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka ayaa sheegay in isaga iyo Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay si degdeg ah ku gudbin doonaan liiska murashaxiinta Aqalka Sare.
“Waxaa noo qorsheysan Aqalka Sare oo aanu sida ugu dhakhsaha badan u guda geli doono, anagoo mid ah oo mideysan. Guddiga Doorashooyinka ee Somaliland, sidii habraacu ahaa ay noo soo qori doonto berri laga bilaabo inaan muddadii loo baahnaa ku soo gudbino liiska murashaxiinta Aqalka Sare, aniga iyo Gudoomiye Cabdi Xaashi, markaanu uruurino dadka daneynaaya.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaanu ku tala jirnaa Insha’Allah, toddobaadka soo socda ee Sabtida ka bilaabato in la guda galo Doorashadii Senatorada ama Xubnaha Aqalka Sare ee kow iyo tobanka ah, ee ku metelaya Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Somaliya in la doorto toddobaadkaas gudahiisa.”
Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Gudoomiyaha Aqalka Sare oo ka barbar hadlayay Mahdi Guuleed ayaa tilmaamay inay doonayaan in doorashada Gobolada Waqooyi noqoto mid daahfuran, tusaalena u noqota doorashooyinka guud ee dalka.
“Waxaan rabnaa doorashadayadu inay u dhacdo si xalaala oo nabada oo furan, oo ay noqoto mid tusaale fiican u noqoto guud ahaan doorashooyinka dalka ka socda.” Ayuu yiri Cabdi Xaashi.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble ayaa isna sheegay in Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi uu gacan ku siin doono in doorashadaasi noqoto mid xor ah, oo ay wada ogol yihiin.
Previous articleKulankii Farmaajo iyo Rooble oo lagu kala kacay (3 qodob ayaa laga dooday)
Next articleSh C/raxmaan Shariif “Kiiska Ikraan Tahliil waxaa laga soo minguuuriyay dilkii Jamal Khashoggi”